MPT | Facebook social network brand page statistics
/mptofficialpage 10 517 259
MPT သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအား လိုင်းဖုန်းနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးလျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ပေါင်း (၁၃၀) ကျော်ကြာအောင် မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်မှု တွင် ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့အချိန်တွင် MPT သည် နိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံး လွှမ်းခြုံထားနိုင်သော ကွန်ရက် စနစ်ဆိုင်ရာ အခြေခံလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်နေကာ 2G နှင့် 3G နည်းပညာများ အပြင် 4G နည်းပညာ ကိုလည်း စတင် အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်သည်။ ယခု အချိန်တွင် လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့် အခြားသော အရောင်းဌာန များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထားရှိပြီး ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူစွာ လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်ရန်အတွက် ရည်သန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ MPT ၏ ဝန်ထမ်းအင်အား (၈၀၀၀) ကျော်၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြင့် MPT သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
MPT ၏ ၀န်ဆောင်မှုများ ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ ၊ CSR လှုပ်ရှားမှုများ အပြင် MPT နှင့် လုပ်ငန်းစပ်တူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို MPT ၏ တရားဝင် website ဖြစ်သည့် http://mpt.com.mm/mm/ တွင် ၀င်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် သင်နေ့စဉ်လိုအပ်သမျှ သတင်းအချက်အလက်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် ရရှိနိုင်မည့် MPT ၏ လိုတရ Portal ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။ MPT ၏ လိုတရ Facebook Official Page ကိုလည်း အောက်ပါ Link အတိုင်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရူလေ့လာနိုင်ပါသည်။ https://www.facebook.com/lotayaportal/
လိုတရ Portal ၏ အမျိူးစားစုံလင်သော ကဏ္ဍများက သင့်နေ့စဉ်ဘ၀ကို ပြည့်စုံအောင် ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။
We are the first and leading telecommunication company in Myanmar, providing both fixed and mobile telecommunication services to the people and enterprises of Myanmar.
For over 130 years, we have been championing the development of the telecommunication industry in Myanmar. Today, we operateanationwide network infrastructure, utilizing not only 2G and 3G technologies but also 4G technologies.
Through our wide network of retail outlets and points of sale, we aim to make telecommunication services more accessible nationwide. Together with our workforce of over 8000 employees and our partners KDDI-Sumitomo, we are committed to continually driving the development of the telecommunication sector, and Myanmar, going forward.
Information about MPT’s services, job opportunities, news, CSR activities, and partnerships with MPT can be found and read on MPT’s official website, http://mpt.com.mm/en/.
Moreover, MPT’s Lo Ta Ya Portal was established in March 2016, where you can access daily news and information as you need. You can also refer to MPT’s Lo Ta Ya Facebook Official page, https://www.facebook.com/lotayaportal/. Lo Ta Ya Portal’s wide variety of categories will offer you the contentment you need in your daily lives.
MPT သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအား လိုင်းဖုန်းနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးလျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခြု…
Myanmar Brands Telecom
+ 43 912 fans last month
- 866 fans last week
- 121 fansaday
Telenor Myanmar 10 135 410
Ooredoo Myanmar6758 467